विश्व कीर्तिमानको रेकर्ड राखेपछिको खुशी ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more विश्व कीर्तिमानको रेकर्ड राखेपछिको खुशी !
विश्व कीर्तिमानको रेकर्ड राखेपछिको खुशी !
मंसिर २२ गते, २०७६ - ११:०३
काठमाडौं । नेपालमा जारी तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग)को महिला क्रिकेटमा सहभागी हुँदा नेपाली टोलीका सदस्य अञ्जली चन्दले ठूलो लक्ष्य राखेकी थिइन । चार वर्षपछि टोलीमा स्थान बनाएकाले खेलमा मेहनत गरेर राम्रो खेल पस्कने र विपक्षीको एक÷दुई विकेट लिने मात्र उनको लक्ष्य थियो ।
तर साग प्रतियोगिताले उनलाई विश्वस्तरमा चिनायो । माल्दिभ्सविरुद्धको खेलमा टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेटको इतिहासमा विश्व कीर्तिमान बनाएपछि स्वदेश तथा विदेशमा समेत उनको चर्चा शिखरमा पुगेको छ । सुदुरपश्चिमको बैतडी दशरथचन्द नगरपालिकाका चन्दले माल्दिभ्सविरुद्धको लिग चरणको पहिलो खेलमा दुई दशमलव एक ओभर बलिङमा कुनै रन नदिई छ विकेट लिएपछि उनले विश्व कीर्तिमान कायम गरेकी हुन् ।
त्यस्तै चन्दले शनिबार पोखरा रङ्गशालामा कास्य पदकका लागि माल्दिभ्सविरुद्ध नै भएको प्रतिस्पर्धामा समेत उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सफल भइकी छिन् । ‘प्लेयर अफ दी म्याच’ बन्न सफल उनले आफ्नो चार ओभरको बलिङमा जम्मा एक रन खर्चेर चार विकट लिएकी थिइन । प्रतियोगितामा उनले ११ विकेट लिन सफल भइन।
कीर्तिमानी चन्द आफूले प्राप्त गरेको सफलता अकल्पनीय रहेको बताउँछिन् । केही वर्षको अन्तरालपछि टोलीमा स्थान बनाएकाले पनि खेलमा ठूलो सपना नराखेको उनले बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई यति ठूलो सफलता मिल्छजस्तो लागेको थिएन । प्रतिस्पर्धामा ह्याट्रिक गरेँजस्तो लागेको थियो, तर खेलपछि प्रशिक्षकले तिम्रो नाममा विश्व कीर्तिमानी भयो भनेपछि बल्ल थाहा पाएँ, त्यसपछि त मेरो खुशीको सीमानै रहेन ।’
सन् २०१५ वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि उनी क्रिकेटबाट केही वर्ष टाढा रहिन् तर क्रिकेटप्रतिको मायाले उनलाई छाडेन । घरपरिवारको साथ, सहयोग र हौसलाले गत असोजमा सम्पन्न ‘वुमन्स क्रिकेट लिग’ बाट उनी पुनः क्रिकेटमा फर्किन् । त्यस प्रतियोगितामा समेत चन्दले राम्रो छाप छाड्न सफल भएकि छिन् ।
कक्षा ८ मा पढ्दादेखि नै उनी क्रिकेट खेल्न शुरु गरेकि थिइन्। खेलकूदमा बाल्यकालदेखिनै उनीमा रुचि थियो । उनले शुरुआती दिनहरू स्मरण गरे । उनले शुरुआती दिनहरू स्मरण गर्दै भनिन्, ‘गाउँमा दाइहरूले क्रिकेट खेलेको देखेको थिएँ । एक दिन दाईले केटीहरूको खेल छ, तिमी जान्छौँ भनेपछि म गएँ । त्यसपछि मलाई क्रिकेटप्रति रुचि बढ्न थाल्यो ।’
सागमा समेत टोलीले स्वर्ण पदकको सपना देखेको थियो । घरेलु मैदानमा राम्रो क्रिकेट खेलेर स्वर्ण नै जित्ने लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा नभएकामा उनी दुःखी छिन् । सागमा नेपाल कास्य पदकमा सीमित भए पनि सन् २०२० मा हुने विश्वकप छनोटमा नेपालका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै देशलाई खुशी दिने उनको सपना छ ।
टेष्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रहरूसँग स्पर्धा गर्दा लक्ष्य पूरा नभएको बताउँदै उनले थपिन्, ‘टोलीमा गोल्ड ल्याउने नै सबैको सपना थियो । टेष्ट राष्ट्रसँग खेल्दा कठिन भयो । महिला क्रिकेटमा सरकारले जति सहयोग गर्दछ, त्यति नै राम्रो हुन्छ । देशका लागि सधैँ राम्रो गर्ने ध्यानमा हुनेछौँ ।’
महिला क्रिकेटलाई राज्यले त्यति प्राथमिकता नदिएको उनको बुझाइ छ । खेलाडीलाई सेवासुविधा तथा महिला क्रिकेटका समेत घरेलु लिग सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा नयाँ र राम्रा खेलाडी उत्पादन भएर देशलाई फाइदा पुग्ने विश्वास उनको छ । रासस
मंसिर २२ गते, २०७६ - ११:०३ मा प्रकाशित